I-Semalt ichaza Ukwahlukana phakathi kokulahla kweeNkonzo zokuhlaselwa kweeNkonzo, ukuCwangcisa kunye nokuKhatyelwa kweeNkcitho zokuCoca.
Iinkqubo ze-cryptage zenzelwe ukufumanisa i-bots kunye nokuzikhusela ekuvuneni naluphi uhlobo lolwazi. Kubuhlungu gqitha ukuba iibhotshi ziye zachitshiyelwa ukutshintshela ukhuseleko kwaye zifaka iinkqubo ze-keylogger kumashishini a sulele. I-keyloggers sinceda ukulawula i-bots nokucoca zonke iinkqubo zedivaysi yekhompyutha, ezisetyenziselwa ukugxotha i-ID ye-PayPal okanye iinkcukacha zekhadi lesikweletu. I-Botnets zisetyenziselwa ukusabalalisa nokusabalalisa iintlobo ezahlukeneyo zeentsholongwane kunye neebhodnethi kwinethiwekhi. Baxhamla abasebenzisi kwimisebenzi enobungozi kwaye benze iikhompyutha zabo kunye nee-ID ze-imeyile. Ukuba kwenzeka ukuba ucofe kwi-system-click-click-click, i-botnets ingafikelela iinkcukacha zakho zemali - employee payroll management. Zombies zisetyenziselwa ukusetyenziswa kolwazi lomsebenzisi ukufumana imali kwiinkqubo zokukhawula ngokukhawuleza.
uJack Miller, u-13 (Semalt uMphathi oyiNtloko wabaPhumelele kwabaThengi, uchaza ukuba iibhotile zisetyenziselwa ukuhlaselwa kwezixhobo ezithile zekhomputha okanye inethiwekhi kwaye ziphazamise iinkonzo ngokuphanga. Ukongeza koko, badla i-bandwidth yakho yenethwekhi kwaye balayithise i-system resources..Ukukhishwa kweeNkonzo zokuhlaselwa kweeNkonzo (DoS) zisetyenziselwa ukutshabalalisa isayithi lomkhuphiswano kwaye lidlala indima ebalulekileyo ekuthatheleni.
I-Botnets iyahluka kwiinkathazo kunye nobukhulu; Ezinye zazo zinkulu ngelixa ezinye zincinci. Iibhenets ezinkulu zinezigidi zeZombi zodwa, kwaye iibhota ezincinci zinokuba needrones ezimbalwa kuphela. I-Botnets yafunyanwa kuqala ngoJulayi 2010, xa i-FBI ibambe intombazana yaseSlovenia. Wayetyala ngokusasaza izinto ezinobungozi ukusuka kumakhulu ukuya kumawaka eekhompyutha. Ngokomyinge, iikhomputha ezili-12 zezigulane zaxhaswa ngamabhodane. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ze-bots ezinobungozi, ezinye zazo ezinokuchaphazela iifayile zekhompuyutha ngendlela efanayo neentsholongwane okanye i-malware, kwaye ezinye zazo zincinci kwaye azikwazi ukusulela idivayisi yakho nayiphi na indleko. Inethiwekhi yombhobhothi okanye i-botnet yiqela leekhomputha ze-zombie okanye i-bots ezilawulwa ngabagaxekile kwaye zixhaphaza izixhobo ezininzi. I-Botnets iyakuthi ibe yinkqubo esemthethweni yezixhobo zeekhompyutha eziqhuba iinkqubo ezifanayo okanye iqela leekhompyuter ezisuleleke kwiintsholongwane kunye ne-malware. Emva kokuba ifakwe kwiikhompyutha zakho, ngokubanzi ngaphandle kolwazi lwabasebenzisi, ikhompyutheni yakho iya kuba yi-zombie, i-drone okanye ikhomputha ngaphandle kwexesha. Akuyi kusebenza ngokufanelekileyo kwaye ayiyi kulwa nokulawulwa kwabalawuli be-bot. Kwiimeko ezinjalo, iinkqubo zokulwa ne-malware okanye isofthiwe ye-antivirus kufuneka inikwe amandla ngokukhawuleza.
Ugaxekile kunye nokuLawulwa kweZithuthi:
I-botnet isetyenziselwa ukusulela inkqubo yekhompyutha ye-TCP / IP kwaye isebenzise izicelo zayo ezithile. I-Botnets zisetyenziselwa kakhulu ukudibanisa neZombi ezininzi kunye neentsholongwane kunye nokuvuna iidilesi ze-imeyile. Bathumela inani elikhulu logaxekile kunye ne-imeyli ye-phishing kumaxhoba. Ngokuqhelekileyo, i-Zombies kunye ne-bots zisetyenziswe ukukhohlisa igama lomsebenzisi kunye nephasiwedi yomsebenzisi ukuze i-botnet ikwazi ukulawula imisebenzi yayo kwaye ingayisebenzisa. Kufuneka uhlaziye rhoqo izikhuseleko zakho zokuqinisekisa ukhuseleko lwakho kwi-intanethi.